Puntland oo laga yaabo in ay lumiso mashruuc labaad oo muhiim ah - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo laga yaabo in ay lumiso mashruuc labaad oo muhiim ah
Puntland oo laga yaabo in ay lumiso mashruuc labaad oo muhiim ah
September 17, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Biyo xireen hore oo laga dhisay gudaha Puntland. [Sawirka]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa laga yaabaa in ay lumiso mashruuc labaad oo muhiim ah sababtoo ah muran ka dhaxeeya labo haayadood oo dowladda katirsan, sida uu sheegay xildhibaan.
Xildhibaan katirsan baarlamaanka Puntland Cabdikariim Xuseen Guure oo loo yaqaan Shaacuur oo shir jaraaid ku qabtay magaalada Garoowe ayaa sheegay in mashruuca biyo-xireen ah oo ay fulineysay Wasaaradda Deegaanka laga yaabo in la joojiyo kadib markii haayada PSAWEN ay deeqbixiyaha ka codsatay in la joojiyo, iyada oo ku andacooneysa in ay iyadu masuul ka tahay mashaariicda biyaha ee Puntland.
Shaacuur ayaa intaas ku daray in Madaxweynaha Puntland uusan waxba ka qaban muranka u dhaxeeya labadaas haayadood, isaga oo si toos ah ugu eedeeyay in Cabdiweli Maxamed Cali uu dabada ka riixayo haayada PSAWEN, inkasta oo uusan bixin wax cadeyn ah.
Mashruuca biyo-xireenka ah ayaa ka socda magaalada Buurtinle ee gobolka Nugaal, waxaana maalgelinaysa haayada Jarmalka ah ee GIZ, taasoo horaantii bishaan joojisay mashruucii dhismaha wadada laamiga ah ee isku xira Garoowe iyo Gaalkacyo, kadib markii ay sheegtay in shaqada sidii la rabay aan loo qaban.
16 qof oo ku dhimatay dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Jubbaland iyo Al-Shabaab oo ka dhacay gobolka Gedo
Al Shabab suicide bomber hits Somalia military convoy in Afgoye
Mogadishu-(Puntland Mirror) A suicide car bomber hit a military convoy outside Mogadishu on Tuesday, Reuters news agency reported, citing police officials. The attack occurred in Afgoye, an agricultural district about 30 km northwest of Mogadishu, [...]
Soomaaliya oo mashruuc $112 milyan ah ka heshay Bankiga Adduunka oo waddooyin loogu dhisayo afar magaalo
Muqdisho-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa $112 milyan ka heshay Bankiga Adduunka si loogu dhiso waddooyin kuyaala qaar kamid ah magaalooyinka dalka. Wasiirka Maaliyada Dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Bayle Ducaale ayaa sheegay in dhaqaale dhan $112 milyan [...]